साउन ९ गतेदेखि अनशन बस्ने डा. केसीको घोषणा
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण २ गते, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका ठोस माग राखेर बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशनको घोषणा गर्नु भएको छ । आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै केसीले आउँदो ९ गतेदेखि अनशन बस्ने
निगमले भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा नलिने
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण २ गते, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा नलिने निर्णय गरेको छ । निगमको एक मात्र बोइङ विमान मर्मत गर्न सिङ्गापुर लगिने भएपछि मर्मत अवधिभर ४५ देखि ६० दिन भुटान एयरलाइन्सको विमान भाडामा लिने निर्णय गरेको
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण २ गते, चरिकोट । आफूलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमुद ढुङ्गेललाई फोन गर्ने एकजना व्यक्तिलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रहरी नायब महानिरीक्षक बनेर ढुङ्गेललाई फोन गर्ने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–२
३५ डिएसपी परे एसपी बढुवाको सिफारिसमा
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण २ गते, काठमाडौं । ३५ जना डिएसपीलाई एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसअघि २५ जना एसपीलाई एसएसपीमा, ११ डिआइजीलाई एआइजीमा र १५ एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ । बढुवा समितिले ३५ जना डिएसपीलाई एसपीमा बढुवाका लागि
अञ्चल अस्पताल जनकपुरको सेवा तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा आयोग द्धारा अनुसन्धान शुरु
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्राबण १ गते, जनकपुरधाम । जनकपुर अञ्चल अस्पतालले उपलव्ध गराउने सेवाहरु गुणस्तरहिन रहेको, महशुल निजी क्लिनिक भन्दा महंगो भएको, असहाय तथा विपन्न वर्गका विरामीहरुले सेवा पाउन नसकेको, अस्पताल परिसरको सरसफाईमा अस्पताल व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको, चिकित्सकहरुले आफ्नो डिउटीको समयमा पनि निजी
रामेछापमा बाढीले पुल र घर बगायो, क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी
श्रावण १ गते । रामेछापमा गएराति भीषण वर्षापछि आएको बाढीले सवारी तर्ने पुल र केही घर बगाएको छ । जिल्लाको गोकुलगंगा र लिखु गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको छत्याउने खोलाको बाढीले पुल र घर बगाएको हो । मध्यराति आएको बाढीले भर्खरै निर्माण गरिएको पक्की
शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती, नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?
श्रावण १ गते, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ । अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो
श्रावण १ गते, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झन्डै डेढ महिना हुँदै छ । तर, २३ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दलहरुको भाका सरिरहेको छ । पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्म गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब
श्रावण १ गते, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको चिनी उद्योगमा पनि पर्नसक्ने विज्ञहरूले आँकलन गरेका छन् । विश्वभर उखुको उत्पादनमा आएको वृद्धिका कारण चिनी ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएको हो । तीन साताअघि ६१
काठमाडौं महानगरको बजेट १० अर्ब, सवारी करलाई कडाइ गर्ने
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण १ गते, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका लागि १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सर्वसम्मतिबाट आव २०७४र७५ का लागि आर्थिक विधेयकबाट १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । संक्षिप्त विवरण
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण १ गते, काठमाडौं । दैलेख केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । शनिबार राति १० बजेर २० मिनेट जाँदा दैलेख केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको कारण केही क्षति भएको जानकारी
१५ एसएसपी डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस, एक नम्बरमा सर्वेन्द्र खनाल
मिथिलाञ्चल समाचारदाता श्रावण १ गते, काठमाडौं । १५ जना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । ११ डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गरेलगतै बढुवा समितिले १५ एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । एसएसपीबाट डिआइजी बढुवामा सिफारिस हुनेहरुमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल,
तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरियो भने राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार ः संयोजक ठाकुर
मिथिलाञ्चल समाचारदाता अषाढ ३१ गते , जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरे स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनमा समस्या भएकाले अन्य दुईवटा सहमतिलाई सरकारले पूरा
महोत्तरी बाट काठमाडौंका लागि छुटेको बस ट्रक सँग ठोक्किँदा दुबै चालकसहित ३१ घाइते
मिथिलाञ्चल समाचारदाता असार ३१ गते, धादिङ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको खटौटीमा शनिबार यात्रुबाहक बस र ट्रक एक आपसमा ठोक्किँदा ३१ जना घाइते भएका छन् । महोत्तरीबाट काठमाडौंका लागि छुटेको ३१ ना ५ ख ५०२ नम्बरको यात्रु बस र विपरितबाट जाँदै
एसएसबीले नेपालको सीमानामा गुप्तचर खटाउने
अषाढ, ३१ गते,काठमाडौं । नेपाल र भुटानसँगको खुल्ला सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय सशष्त्र सीमा बल ९एसएसबी० ले यसको गुप्तचर संयन्त्र स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएको छ । भारतविरोधि शक्तिहरुका गतिविधि निगरानी गर्न भन्दै पहिलोपटक स्थापना गर्न लागिएको संयन्त्रमा ६ सय ५० फिल्ड तथा
निर्वाचन आयुक्तलाई १५ करोडको गाडी
अषाढ, ३१ गते,काठमाडौं । करोडौं मूल्यका गाडी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि करिब १५ करोडका बिलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक पनि प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि
अषाढ, ३१ गते,काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तहबाटै ‘अभियानात्मक तयारी’ गर्ने भएको छ । २ साउनदेखि सुरु हुने केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकलगत्तै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताले मधेस झरेर निर्वाचन तयारी गर्न लागेका
ठूला अस्पतालको चरम लापरबाही, स्वास्थ्य जाँचमा ३० वर्ष पुराना उपकरण
अषाढ ३१, काठमाडौं । उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । त्यस्ता उपकरणको आयु औसत दुईदेखि पाँच वर्षको हुन्छ । वीर, टिचिङ, सिभिललगायतका अस्पतालले वर्षौं पुराना उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘दुईदेखि पाँच वर्ष मात्रै औसत
नेपालले आतङ्कवादविरुद्ध सात कानुन बनाउने ः गृहमन्त्री शर्मा
मिथिलाञ्चल समाचारदाता असार ३० गते,काठमाडांै । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भएको बताउनुभएको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रहरुको गृहमन्त्रीस्तरीय आठौँ बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा राजनीति, सम्बन्धित
महालेखाको नयाँ नियमः अब बेरुजु व्यक्तिकै नाममा, ‘क्लिन चिट’ नपाएका व्यक्ति कार्यालय प्रमुख हुन नपाउने
अषाढ २९ गते,काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले संस्थाको नाममा बेरुजु रहँदा सम्बन्धित निकायका प्रमुखले जिम्मेवारी नलिएको भन्दै अबदेखि व्यक्तिकै नाममा राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सोमबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले कुनै पनि संस्थाको बेरुजु सो संस्थाका